သူဟာသူ ဆိုင်ကယ်မောင်းလာတဲ့လူငယ်တွေကို Vigo ကားပေါ်ကနေ ရဲစစ်သားတွေက သေ န တ်နဲ့ - New State
ထားဝယ်မှာ သူဟာသူ ဆိုင်ကယ်မောင်းလာတဲ့လူငယ်တွေကို Vigo ကားပေါ်ကနေ ရဲစစ်သားတွေက သေ န တ်နဲ့ ပ စ်သ တ်တာ
တကမ္ဘာလုံး သိနေတဲ့ video ဖိုင်ကြီး ရှိနေရက် စစ်ဆေးရုံ ဆေးစာထဲမှာ ဆိုင်ကယ်မှောက်လို့ ဦးခေါင်းအပြ င်းအ ထန် ဒ ဏ်ရာရဆိုပြီးထုတ်ပြန်လာတဲ့ဆေးစာရွက် ဘယ်လိုမေ့မလဲ…?
မြောက်ဥက္ကလာပမှာ ပရဟိတသမားတွေကို ဦးခေါင်းပဲ တခွ မ်းခွမ်း ရို က်ခွဲခဲ့တာတွေ မြောက်ဥက္ကလာပမှာပဲ လူတဦးကို ဆွဲဖမ်းလာပြီး လမ်းမပေါ်ထုတ် ဦးခေါင်းကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခဲ့တာတွေ …
ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့ကျောင်းဆရာမကြီးကို ကျောင်းရှေ့မှာပဲ ပ စ်သ တ်သွားတာတွေ လူတယောက် သပိတ်ဖြိုခွင်းတော့ ကားအောက် ဝင်ပုန်းနေတာ အောက်ထဲကထုတ် သေ န တ်နဲ့ ပ စ်သ တ်သွားတာတွေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတုန်းပဲ…
အနာဂတ်တွေအများကြီးနဲ့ တဦးတည်းသောသမီးလေး မန်းလေးက မကြယ်စင် ကလေးမလေး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတာ ခေါင်းကိုပဲ ရွေးပ စ်သွားတာတွေ ငါတို့မှာ သူ့အဖေမြင်တော့ ဘယ်လောက်ကြွေကွဲခဲ့ရလဲ မင်းတို့ မသိဘူး…
ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့လူအုပ်ကြီကို လူစုခွဲရရင် ကျေနပ်သင့်ပီပေါ့ လူစုခွဲချိန် ထွက်ပြေးနေတဲ့သူတွေကိုအကြင်နာတရားမရှိ သေ အောင်လှမ်းပ စ်လို့ ကျောင်းရှေ့မှာ ခွေခွေလေး အသညက်ပေးလိုက်ရတဲ့ အမွှာထဲကတယောက်ရယ်…
အငယ်ဆုံးသားလေး ဆရာဝန်လောင်းလေး အိမ်ကတားနေရက် အိမ်ကမသိအောင်ခိုးထွက်ပြီး ဆန္ဒထွက်ပြတာ မ င်းတို့သညတ်လိုက်သေးတယ်။ ငါတို့မှာ သူ့မိဘအင်တာဗျူးတွေ ကြည့်ပြီး ဘယ်လောက်ထိ ငိုခဲ့ရလဲဆိုတာ မင်းတို့မှ မသိခဲ့ကြတာ ဘယ်မေ့မလဲလေ…
ရှာဖွေရေးဆိုပြီး အိမ်ထဲက ရင်ခွင်ပိုက်အရွယ် ကလေးတွေကိုတောင် ပ စ်သ တ်ခဲ့တာတွေ ဆန္ဒပြသပိတ်တပ်တွေကို လက်နက်ကြီးတွေပါသုံးဖြိုခွင်းသ တ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေ မျက်လုံးထဲ မြင်နေတုန်းပါ
ဒီနေ့ဖမ်းသွား နောက်ရက် အလေ ာင်းပြန်ပို့ ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်ရင်ကွဲခဲ့ရလဲ မင်းတို့မသိဘူး…။
လှိုင်သာယာသပိတ်တွေကို စစ်မြေပြင်လို နှိမ်နင်းတာ လူဘယ်နှစ်ယောက်သေလဲ မင်းတို့ သတိရသေးလား…?
မြောက်ဥက္ကလာ မြောက်ဒဂုံသပိတ်တွေ ဖြိုခွင်းတုန်းကမင်းတို့ ဘယ်လောက်သတ်ခဲ့လဲ သတိရသေးလား…?
ပဲခူးသပိတ်ကို ဖြိုခွင်းတော့ လူဘယ်နှစ်ယောက် သ တ်ဖြ တ်ခဲ့လဲ မင်းတို့ သတိရသေးလား…?
ဒါတွေဟာ ကိုယ့်ဦးနှောက်ထဲ မှတ်မိသလောက် ချရေးပြတာပဲ ရှိသေးတယ် အရင်လတွေ မင်းတိုဘယ်လောက်ထိ သ တ်ဖြတ်ခဲ့လဲ မှတ်မိသေးလား…?
ပြည်သူတွေကတော့ ဘယ်မေ့မလဲလေ နာကျင်ရလွန်းလို့ မင်းတို့တွေ အထိနာတဲ့အခါ သေ ဆုံ းတဲ့အခါ အောင်ပွဲရသလိုကို ပျော်နေကြတာလေဒီလိုနေ့ရက်တွေ ရောက်ချင်လို့ အံကိုကြိတ် အားတင်းခဲ့ရတာတွေ ပြည်သူတွေမှာ ဘယ်လောက်ထိ နာကျင်ခဲ့ရလဲ မင်းတို့တွေ ဘယ်သိကြမလဲလေ …။
မင်းတို့ပြောတာ မှတ်မိပါတယ် လမ်းမပေါ်ထွက်လို့ အပစ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့စကား နိုင်ငံရေးသမားတွေ မြှောက်ပေးလို့ သေ ကြတယ်ဆိုပြီး မင်းတို့ပြောတဲ့စကားတွေ ငါတို့ပြည်သူတွေ ဘယ်မေ့မလဲလေ
သ တ်တဲ့သူကို အပြစ်မမြင် သေသူကို ကဲ့ရဲ့နှိမ့်ချခဲ့ကြတဲ့ မင်းတို့လုပ်ရပ်တွေ ပြည်သူတွေက တိတိကျကျကို မှတ်မိနေဆဲပါလေ …။
တိုင်းပြည်မှာ ဘယ်သူပဲ သေ သေ ပျော်စရာမဟုတ်ပေမယ့်မင်းတို့ပေးတဲ့ဒဏ်ရာတွေက နာကျင်ရလွန်းလို့ မင်းတို့ အထိနာတဲ့အခါ ပြည်သူတွေ ပျော်ကြတာ သိစေချင်လို့ပါ…။